ကျန်ရှိနေတဲ့ ကယားပြည်နယ်က မိသားစုအတွက် အဝေးကနေ ဆုတောင်းပေးရုံမှလွဲလို့ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့ ချမ်းမင်းရဲ ထွဋ် – Cele Oscar
ကျန်ရှိနေတဲ့ ကယားပြည်နယ်က မိသားစုအတွက် အဝေးကနေ ဆုတောင်းပေးရုံမှလွဲလို့ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့ ချမ်းမင်းရဲ ထွဋ်
May 27, 2021 By L YC News
မျောလျဒယျသရုပျဆောငျ မငျးသားခြော ခမျြးမငျးရဲထှဋျ ကတော့ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲကွီးမှာ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရပျတညျနကော အရေးတျောပုံကွီးမှာ တတျနိုငျသလောကျ ပါဝငျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ..။ခမျြးမငျးရဲထှဋျ ကတော့ ပဈခတျမှု တှကွေောငျ့ အခွအေနတှေဆေိုးရှားနတေဲ့ကယားပွညျနယျအတှကျ စိတျပူပငျနပွေီး မိသားစုရဲ့လကျရှိအခွအေတှကေိုလညျး စိတျမကောငျးစှာ ပွောပွလာပါတယျ..။
ဘေးလှတျရာကို ပွေးဖို့ အထုတျအပိုးတှပွေငျဆငျထားပွီး ပုနျးနရေတဲ့ လှိုငျကျောက မိသားစုတှေ အတှကျ စိတျတှပေူ နရေပမေယျ့ အိမျမပွနျနိုငျလို့ဝမျးနညျး စိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့ အကွောငျးတှကေို ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။မိသားစုနဲ့ ဖုနျးအဆကျ အသှယျရပမေယျ့လညျး စိတျပူစိုးရိမျနရေတဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့အတူ မိသားစုတှအေပွငျ ပွညျသူတှေ အန်တရာယျကငျးဘေးရှငျးစဖေို့ကိုလညျး ဆုတောငျးစကားဆို ထားပါသေးတယျ..။
“စိတျတှပေူလိုကျတာ …အမတေို့လညျး အခုကို အထုပျပွငျပီး ပုနျးနရေတဲ့ အခွအေနေ …ခုကပွနျသှားလို့လညျးမရ … ညကဖုနျးဆကျတော့လညျး .. သားပွနျလာလိုကျရမှာလို့ပွောတာ ….ဘာပဲပွောပွော အိမျမှာ ကြှနျတျော တဈယောကျ ရှိတော့ တခုခုဆိုကူလို့ရတာပေါ့လို့ပွောတာ ….အိမျသားတဈယောကျအဝေးမှာရှိနတောပဲ တဈယောကျစာပိုစိတျအေးရတယျတဲ့ …လှိုငျကျောရေ ….. ပွညျသူတိုငျး မိသားစုတိုငျး ဘေးကငျးပါစကှော …. 😔🙏🏽PrayForKayah..” ဆိုပွီး ရေးသားပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ချမ်းမင်းရဲထွဋ် ကတော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေကာ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ချမ်းမင်းရဲထွဋ် ကတော့ ပစ်ခတ်မှု တွေကြောင့် အခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့ကယားပြည်နယ်အတွက် စိတ်ပူပင်နေပြီး မိသားစုရဲ့လက်ရှိအခြေအတွေကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြလာပါတယ်..။
ဘေးလွတ်ရာကို ပြေးဖို့ အထုတ်အပိုးတွေပြင်ဆင်ထားပြီး ပုန်းနေရတဲ့ လွိုင်ကော်က မိသားစုတွေ အတွက် စိတ်တွေပူ နေရပေမယ့် အိမ်မပြန်နိုင်လို့ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။မိသားစုနဲ့ ဖုန်းအဆက် အသွယ်ရပေမယ့်လည်း စိတ်ပူစိုးရိမ်နေရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့အတူ မိသားစုတွေအပြင် ပြည်သူတွေ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းစေဖို့ကိုလည်း ဆုတောင်းစကားဆို ထားပါသေးတယ်..။
“စိတ်တွေပူလိုက်တာ …အမေတို့လည်း အခုကို အထုပ်ပြင်ပီး ပုန်းနေရတဲ့ အခြေအနေ …ခုကပြန်သွားလို့လည်းမရ … ညကဖုန်းဆက်တော့လည်း .. သားပြန်လာလိုက်ရမှာလို့ပြောတာ ….ဘာပဲပြောပြော အိမ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက် ရှိတော့ တခုခုဆိုကူလို့ရတာပေါ့လို့ပြောတာ ….အိမ်သားတစ်ယောက်အဝေးမှာရှိနေတာပဲ တစ်ယောက်စာပိုစိတ်အေးရတယ်တဲ့ …လွိုင်ကော်ရေ ….. ပြည်သူတိုင်း မိသားစုတိုင်း ဘေးကင်းပါစေကွာ …. 😔🙏🏽PrayForKayah..” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ အနုပညာအလုပ် တွေရပ်နားထားရလို့ ဝင်ငွေ မရှိတာကြောင့် အဝတ်အစားများ ကိုယ်တိုင်ရောင်းချနေတဲ့ ဦးငြိမ်းချမ်း
၅၀၅(က) ဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ ညီမလေးအခြေအနေကို ပြောပြလာတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း……